Iwe Ndiwe Woga Uyo Anodzora Computer Yako Here? - Semalt Expert
Zvakanyatsojeka kuti mamwe malware, kusanganisira ransomware, anoshanda zvakananga pafoni yako. Asi DDoS botnet malware ine maitiro akasiyana-siyana ekushanda, dzimwe dzadzo dzinogona kutora faira yako apo vamwe vanoramba vachimhanya zvinyararire sefaira rekare uye vanomirira mirayiridzo kubva kumudzidzisi kana botmaster. Izvo zvinoparadzira botnets nguva dzose dzinoshandisa mabhoti akawedzera kuburikidza nenzira dzakasiyana-siyana - car truck value guide. Nzira dzezvipembenene dzinosanganisira nzvimbo dzekutsvaga webhusaiti, kubhurwa kwephasiwedi kuwana ruzivo rweUnited ID, uye Trojan horse malware. Zvisinei, vose vanobvumira vatengesi kuti vatonge uye vashandise kombiyuta yako kana foni. Zvechokwadi, zvinenge zvisingabviri kuratidza nhamba yakarurama yebho, kukosheswa kunoratidza kuti kune mairi mabhiriyoni maviri kwavari.
Nei mabhenekisi akasika?
Frank Abagnale, the Semalt Mutengi Achibudirira Mutevedzeri, anotsanangura kuti mabhota akaumbwa nekuda kwekuita zvekuita, kushungurudzwa kwehurumende, kushorwa kwezvikwereti, uye zvimwe zvikonzero. Kubhadhara bhazinesi rebhenekeri paIndaneti hazvibatsiri kunyanya kana wakaedza kuonana nemusikana wepameri.
Mabhota anotungamirirwa sei?
Chimwe chezvinhu zvakakosha zvemabhunetsani ndiko kukwanisa kwavo kugamuchira ruzivo rwakatsvaga kubva kune vadzidzisi vemabhodhoro..Vanogara vachitaurirana nevashambadziri, izvo zvinoita kuti vanopikisa vashandise kero ye IP uye vanoita zvimwe zviito zvezvaanosarudza. Izvo zvinogadziriswa zvebhodaneti zvakasiyana, uye zvivakwa zvavo zvakaputsika muzvikamu zvakasiyana, zvakadai semutengi we botnet muenzaniso uye vezera-to-peer botnet model.
Mukana we botnet muenzaniso:
Ndicho apo makina akabatana ne-centralized seva, uye spammer inopindira kukanganisa mashoko ako ega. Iyo yekudzivirira kupfurikidza inoshanda kune dzimwe mirairo chaiyo yebhodeni uye inogadzirisa zvigadzirwa zvekushandisa kugadzirisa mirayiridzo yemichina ine utachiona.
Botnet-ye-peer muenzaniso wekutevedzera:
Muenzaniso uyu unofanirwa kuchengetedza mazita emakombiyuta akavimbwa uye asina kuvimbika ayo vatengesi vanokurukura uye vanovandudza ma-malware. Dzimwe nguva vanogadzirisa nhamba yemichina yakanyengedzwa zvichienderana nezvinodiwa uye inoita kuti zvive nyore kune vashandisi kutarisa mazita avo emazita uye mapepa. Kana iwe uine mavhareji emitemo wepakati pekutanga, iwe unogona kuve wakakanganiswa nekushungurudzwa uku. Kuti uwedzere kudzivirirwa kwako, iwe unofanirwa kuchenesa mabhenetete uye kuvadzivisa kuti vanyora mashoko ako ega.
Bvisai hutachiona pamakoni ose:
Nzira inotyisa yokubvisa bhotela iri nekubvisa utachiona pamashandi ako ose. Pamagadzirirwo emunhu mumwe nomumwe, mazano ekuwana simba pamusoro pemashini anosanganisira kushandisa anti-malware kana zvirongwa zvinorwisa antivirus, kuisa software kubva kune mabhuku anovimbika nekuchenesa cache yako. Kana wapedza, unogona kubvisa nyore nyore mabhota uye unogona kuvimbisa kuchengetedza kwako paIndaneti. Pamitambo yeIoT, iwe unofanirwa kumhanya fakiti yekugadzirisa kana kuisa faira yacho maererano nemitemo yako. Kana izvi zvisarudzo zvisingaitiki, unogona kutaura neinternational service provider uye kumubvunza kuti avhare urongwa hwako pasi kwamaawa mashomanana kana mazuva.